प्रचण्डको पुस्तक ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ मा के छ ? – Sankalpa Khabar
प्रचण्डको पुस्तक ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ मा के छ ?
संकल्पखबर १५ श्रावण २०७७, बिहीबार १२:४४
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को पुस्तक ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ सार्वजनिक भएको छ । पुस्तकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदमा व्यक्त गरेको विचार समेटिएका छन् ।
पुस्तकमा २०६५ सालदेखि २०७५ सालसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदमा अध्यक्ष दाहालले व्यक्त गरेका विचारहरु विभिन्न ४२ शीर्षकहरुमा समेटिएको छ ।
पुस्तकमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना र संविधान कार्यान्वयनदेखि सशस्त्र विद्रोहका प्रसँगसमेत समेटिएको छ । प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको पुस्तक ३ सय ८५ पेजको छ भने मूल्य ५ सय रुपैयाँ राखिएको छ ।
‘हामी जहाँ आइपुगेका छौं यो केही असाधारण राजनीतिक प्रयोगको रुपमा छ, जो दुनियाँमा कमै देखापर्ने गर्दछु । एउटा सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्षका शक्तिहरु आपसमा सहमति गरेर निरंकुशताका विरुद्ध लड्ने एउटा नयाँ प्रयोगको रुपमा हाम्रो संविधानसभा गठन भयो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रकृया दुनियाँमा जहाँजहाँ भयो, त्यहाँ आन्दोलनमा, क्रान्तिमा विद्रोहमा जो विजेता हुन्छन्, ती विजेताहरुले नै आयोजना गर्ने गरेका छन्’, पुस्तकको भूमिकामा भनिएको छ
Previous Previous post: पर्सा र बारामा कोरोना संक्रमण जटिल बन्दै, संक्रमित घरमै बस्न बाध्य
Next Next post: एकतोला सुनको मूल्य ९९ हजार
ट्राफिक महाशाखामा कार्यरत दुई प्रहरीलाई कोरोना...
संकल्पखबर	१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार ११:२२
काठमाडौं । सुरक्षा निकायमा कोरोनाको संक्रमणदर बढिरहेका बेला महानगरीय ट्राफिक महाशाखा काठमाडौंमा कार्यरत दुई प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।...
बालुवाटारमा कुरा नमिलेपछि प्रचण्डले खुमलटारमा बोलाए...
संकल्पखबर	१८ श्रावण २०७७, आईतवार १६:५२
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा भएको छलफल बिना निश्कर्ष टुंगिएको छ । बालुवाटर बैठकबाट निस्किएका अध्यक्ष पुष्पकमल...
डनबाद, धनबादको फ्युजन बन्दैछ बहुदलीय जनबाद
भुपमणि दाहाल	१९ श्रावण २०७७, सोमबार ०८:०४
बोलीमा मिठास, निर्णयमा स्पष्टता, चरित्रमा शुद्धता र कार्यमा निरन्तरता जस्ता कुराहरुलाई माक्सबादका आदर्श मानिन्छन । जनताको घरदैलो पुग्ने, उनीहरुका समस्याको...
उपत्यकाका थप १८ प्रहरीमा कोरोना पुष्टि, प्रहरीमा...
संकल्पखबर	१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १३:१६
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका १८ प्रहरीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको सवारी शाखामा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण...
चित्लाङ र चन्द्रागिरीका अविष्मरणीय यादहरू
श्रीराम श्रेष्ठ	१७ श्रावण २०७७, शनिबार १२:५९
समय गतिशील छ । संसार रङ्गिन छ । यो गतिशील र रङ्गिन संसारका हामी दुई दिनका पाहुना । जीवन यात्रामा...